Xisbiyada qaranka oo qatar ugu jira in mailadooda sirdoon shisheeye dabo-galaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiyada qaranka oo qatar ugu jira in mailadooda sirdoon shisheeye dabo-galaan
La daabacay onsdag 14 augusti 2013 kl 12.15
Qaar badan oo kamid ah xisbiyada barlamaanka dalkan Sweden ayaa isticmaala mail-servar laga leeyahey dalka dibadiisa. U kuurgal uu ku sameeyey wargeyska TechWorld, sideeda xisbi ee barlamaanka Sweden systemka mail ay doorteen in ay isticmaalan ayuu wargeyska ogaadey in kalobar ay yahiin mail-server dalka Sweden dibadiisa ku yaala.
Sadex kamdi ah xisbiyada ayaa mail serverada ay isticmaalan waxuu ku yaalaa dalka Mareykanka. Waa mid qatarteeda leh, sidaas waxaa aaminsan Anne.Marie Eklund Löwinder oo ah madaxa amniga hey'ada qaabilsan furaha internetka Swedhen, (.SE).
- In mail-serverada ku yaalin dalka dibadiisa waxey ka micno tahay in macluumaadka uu ka baxayo xadka dalka Sweden taas oo kamicno ah in ay heli karaan hey’ado sirdoon iyo kuwa kaleba. Waa hadii aan la sameyn farsamooyin lagu ilaalin karo macluumadka laakiin waa yaryahiin kuwo sidaas sameeya, ayey tiri.
Ma ahan keliya in server dalka dibadiisa ku yaalo mida dhibkeeda leh balse sidoo kale farsamooyinka lagu ilaaliyo macluumaadka, tusaale sida loo maldaho macluumadka oo looga dhigo mid aan cid kasta aqrisan karina oo ay yartahey inta urur hey’adoda oo sameysa ayaa ayana ah wax dhibkeeda leh, ayey tiri Anne- Eklund Löwinder.
In hey'ado sirdoon oo Mareykan ah ay ilaaliyaan una kuur-galaan macluumaadka internet laysku dhaafsado, sida mailada iyo chatt-ka ayaa bilahii ugu danbeysey ahaa warka ugu weeyn caalamka. Kadib markii Edward Snowden oo lataliye u ahaa hey'ad sirdoon oo Mareykan ka shifey in dowladda Mareykanka ay ku howlan tahay sirdoon iyo dabo-gal weyn oo ay ku sameyso macluumaadka laysku dhaafsado qadka internetka iyo weliba in shirkado waaweyn oo ay kamid yahiin Microsoft, Yahoo, Google, Apple iyo Facebook ay hey'adaha sirdoonka ee Mareykanka ku gacan siinayaan helida macluumaadkan.
Badanaaba ahmiyad sidaas u weyn lama siiyo arimaha amniga ayey tiri Anne.Marie Eklund Löwinder. Sannadkii hore waxey hey'adaha dowligaa ee Swedhen qandraas la geliyeen adeegyada It:ga. Waa in ahmiyad weyn la siiyo arimaha amniga oo aan laga fakerin qiimaha iyo isticmaal wanaaga keliya, ayey leedahey Eklund Löwinder.
- Xisbiyada keliya ma ahan waxa sidaas sameeya. Sannad kasta waxaan soo sarnaa daraasad aan ku eegeyno ururo iyo hey'ado kalo gedisan oo muhiimad weyn ugu fahdiya bulshada , sida saxaafada, hey'adaha dowliga ah, demooyinka, gobalada iyo kuwo kale. Waxaadna arkeysaa in qaar badan ay adeegyadooda internetka ay qadaraas geliyeen oo badanaana doorteen shirkadaodalka dibadiisa ku yaala, ayey tiri. Waxeyna u maleyneysaa in ay taas ugu wacan tahay in aan la dooneynin in lacag la geliyo dhanka amniga internetka.
Sida uu daabacey wargeyska la yiraahdo TechWorld oo asaga wax ka qora arimaha It:ga, xisbiga Folkpartiet ayaa kamid ah xisbiyada mail-serverkooda ku yaalo dalka dibadiisa. Shirkada Google ayuuna xisbiga ka helaa adeega Mail. Laakiin madaxa xil-dhibaanada xisbiga Folkpartiet barlamaanka ku fadhiya Johan Perhson ayaa TT u sheegey in haba yaraateen arintaan hogaanka xisbigo wax iska weydiinin, raaciyeyna in uusan maleyneynin in quwad shisheeye xiiseyneyso in ay dhageysato xisbiga Folkpartiet ururu ahaan.
Laakiin Anne-Marie Eklund Löwinder ayaa qabta in xisbiyada barlamaanka ay habaoontahay in ay ka fakaraan marlabaad arintaan:
- Waxaan qabaa in ay haboontahay in xisbiyada dib u qiimeyn ku sameeyaan qatarta, ayna fiiriyaan waxuu kaga micno noqon karo hadii macluumaadkooda u gacan galo hey'ad dal shihseeye oo sirdoon, yey tiri Anne-Marie Eklund Löwinder, oo ah madaxa amniga hey'ada qaabilsan furaha internet sweden ee .SE.